Posted on फ्रेवुअरी 14, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	काठमाडौँ, २८ माघ : जमिम शाहका हत्याराको खोजीमा अन्ततः नेपाल प्रहरी भारततिर लागेको छ । हत्याराले राजधानी छाडेको आशंका गर्दै मुलुकका विभिन्न भागमा खोजतलास जारी राखेकै वेला प्रहरी भारततिर लागेको हो । प्रहरी अधिकारी ‘ओभर कन्पिmडेन्ट’ भएकोले कडा सुरक्षा रहेको लाजिम्पाट हुँदै हत्यारा उम्किएको रहस्य खुलेपछि प्रहरीले राजधानीसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा खोजीकार्य सुरु गरेको थियो । तर, भरत नेपाली नाम गरेका व्यक्तिले जमिमको स्पेसटाइम केबुलमा फोन गरेर हिन्दी भाषामा हत्याको जिम्मा लिएपछि प्रहरी भारततिर गएको प्रहरीको उच्च स्रोत बताउँछ । प्रहरी अधिकारीहरू भारतको लखनउ र मुम्बई गएका छन् । सोमबार जमिमको स्पेसटाइम केबुलमा फोन गरेर आफूलाई भरत नेपाली बताउनेले हत्याको जिम्मा लिएका थिए । उनले ‘जमिमको हमने मारदिया, भारतके खिलाफ खडा होनेका सजा यही होगा’ भनेका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भरत नेपालीले छोटा राजनसँगको वर्षौंको सम्बन्ध छाडेर आफ्नै समूह खडा गरेका छन् । उनले भारतको मुम्बईमा बसेर संगठित अपराधका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्पेसटाइम केबुलमा फोन गर्नेले नै सोमबार एभिन्युज टेलिभिजनमा पनि फोन गरेर जमिम हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो । जमिम शाहका हत्याका मुख्य योजनाकारले राजधानी छाडिसकेको बताएको दुई दिनपछि प्रहरी हत्याराले पनि राजधानी छाडिसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार बिहीबार प्रहरीको अनुसन्धान टोली अभियुक्त भागेको स्थानतिर खोजतलासका लागि हिँडिसकेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक पक्राउ जमिम हत्याको आशंकामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अपराह्न साढे ३ बजेतिर पक्राउ परेका उनी मनोज अब्बुलकर हुन् । काठमाडौँबाट जेट एयरबाट दिल्ली जान लागेका उनलाई प्रहरीले तयार पारेको हुलिया मिलेकोले सोधपुछका लागि नियन्त्रमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका एसपी गणेश केसीले जानकारी दिए ।
Filed under: समचार « दुतावासद्धारा आयोजित छलफलमा कसले के वोलॆ श्रीमान्ले दिएका अनगिन्ती दुःख:-नायिका मौसमी मल्ल　»